शेयर बजारको पावर :६ वर्ष पहिलेको नेपाल लाईफको १० कित्ता शेयर अहिले कति पुग्यो ? – Insurance Khabar
शेयर बजारको पावर :६ वर्ष पहिलेको नेपाल लाईफको १० कित्ता शेयर अहिले कति पुग्यो ?
प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०७५, सोमबार १६:०९
नेपालको बीमा क्षेत्रमा आफ्नो छुटै छाप छोड्न सफल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स विगत देखि नै लाभांसको हिसाबमा लगानीकर्तालाई खुशी बनाउदै आएको जीवन बीमा कम्पनी हो ।
आर्थिक वर्ष ६८/६९ देखि निरन्तर र आकर्षक लाभांस पस्कदै आएको कम्पनीले व्यापर व्यवसाय संगै नेपालको सबै भन्दा ठुलो बीमा कम्पनी पनि बन्न सफल भएको छ ।
बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २ अर्ब पूँजीको लक्ष्य दिएकोमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सले आफ्नो पुँजी आवश्यक पुँजी भन्दा दुई गुणा पुर्याएको छ । ४ अर्ब भन्दा धेरै पुँजी पुर्याउने क्रममा कम्पनीले विगतका केही वर्ष देखि दिँदै आएको आकर्षक बोनस शेयरको ठुलो हात छ ।
दोश्रो बजारमा अहिले मन्दी आएको छ । अहिले शेयर बजारबाट कमाई हुन्छ र ? भन्ने समुह ठुलो छ तर राम्रो लाभांस दिने कम्पनीलाई दिर्घकालीन रुपमा होल्ड गर्दा पनि फरक नपर्ने तथ्य देख्न सकिन्छ । दोश्रो बजारमा कम्पनीको मूल्य घट्दा समेत राम्रो लाभांस दिदै आएका कम्पनीलाई त्यस्तो ठुलो असर नपर्ने देखिन्छ । नोक्सानीमा गएका कम्पनी वा लाभांस दिन नसक्ने कम्पनीहरु कारोवारका लागि योग्य भएपनि दिर्घकालीन लगानीका लागि त्यति उपयक्त हुदैनन् । दोश्रो बजारमा बियरिस ट्रेण्ड देखिदा लाभांस दिन नसक्ने कम्पनीमा लगानीकर्ताहरु फस्ने र राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनीमा लगानीकर्ताहरुलाई लाभांसले लागत सन्तुलन गर्न देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष ६८/६९ देखि नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सले निरन्तर आकर्षक लाभांस दिँदै आएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष ६८/६९ मा सबै भन्दा धेरै ५६ दशमलव ३२ प्रतिशत नगद लाभांस र ७० प्रतिशत बोनस शेयर गरी जम्मा १२६ दशमलव ३२ प्रतिशत लाभांस प्रदान गरेको थियो । यो ६ वर्षको अवधिमा कम्पनीले एक पटक एफपीओ निस्काशन गरेको थियो ।
कम्पनीको आर्थिक वर्ष ६८/६९को साधारण सभाको बुक क्लोज हुन अघि १० कित्ता शेयर हुने लगानीकर्ताको अहिले १०२ कित्ता शेयर पुगेको छ । कम्पनीको प्रति कित्ता ११०० बजार मूल्यलाई आधार मन्दा आजको दिनमा १०२ कित्ताको बजार मूल्य १ लाख १२ हजार हुन्छ । अहिले सम्म आर्थिक वर्ष ६८/६९को १० कित्ता शेयरबाट लगानीकर्ताले ३ हजार ४ सय ८८ रुपैयाँ नगद लाभासं पनि प्राप्त गरेका छन् ।
हेरौ कम्पनीको विगत ६ वर्षको लाभांसको अवस्था
नोट:नगद लाभांस गणना गर्दा कम्पनीको कर प्रयोजनार्थ नगद लाभांस लाई पनि समावेश गरिएको छ
कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७४/७५ को लाभांस प्रस्ताव गरेको छ । बीमा समितिले स्विकृति दिएको अवस्थामा र कम्पनीको साधारण सभाले पारित गरे पछि कम्पनीका शेयरधनीले २३ दशमलव ५ प्रतिशत नगद लाभांस र २५ प्रतिशत बोनस शेयर प्राप्त गर्ने छन् ।